A na -emechi ụlọ ọrụ ndị njem Bahamas dị na Paris n'ihi nrụzigharị ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » A na -emechi ụlọ ọrụ ndị njem Bahamas dị na Paris n'ihi nrụzigharị ọhụrụ
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation kwupụtara na nso nso a, na Ọktọba 4, 2021, ọ ga -emechi Bahamas Tourist Office (BTO) na Paris, France.
Ọ bụ ihe nwute na Ministri na -ahụ maka njem na -eme mkpebi imechi Bahamas Tourist Office dị na Paris.
Ebe a na -aga na -ahazigharị atụmatụ azụmaahịa ya maka kọntinent Europe na ịhazigharị njem njem ya n'ahịa a.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Bahamas nke dị na London ga-abụ ebe mgbaba ahịa obodo na UK na Europe.
Mmechi nke BTO Paris na -abịa mgbe a na -ahazigharị atụmatụ ire ahịa na kọntinent Europe. Ndozigharị njem njem Bahamas n'ahịa a ga-ahụ ka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Bahamas nke dị na London bụrụ ebe isi ahịa ahịa obodo na UK na Europe. Ọfịs ndị njem nlegharị anya nke Bahamas dị na Paris bụ nke mbụ n'ime ụlọ ọrụ nlegharị anya mba niile nke mba a ga -ehiwe na kọntinent Europe. N'iburu mkpa ọfịs a dị mkpa, ọ bụ ihe nwute na ministri ahụ kpebiri imechi BTO Paris.
Na -ekwu maka mmechi dị nso Bahamas Ọfịs ndị njem na Paris, onye isi njem nlegharị anya Joy Jibrilu kwuru, "Ka ozi anyị na -eme ka ọnụnọ anụ ahụ anyị na Paris mechie, ọ ga -amasị m iji ohere a, n'aha onye osote onye isi ala Honorable I. Chester Cooper, Minista nke Njem nlegharị anya, itinye ego & ụgbọ elu, na ihe niile Tourtù Njem Nleta Bahamas, iji kelee onye njikwa mpaghara n'ihu ọha, Oriakụ Karin Mallet-Gautier, maka afọ iri atọ na anọ nke ije ozi raara onwe ya nye na-ebute ụzọ njem mgbasa ozi Bahamas na France.
Onye isi njem nlegharị anya Joy Jibrilu
“Oriakụ. Mallet-Gautier, ”onye isi ụlọ ọrụ gbakwụnyere“ lekọtara njem njem Bahamas na Belgium, Luxemburg, Monaco, Switzerland na-asụ French, Spain na Portugal. N'ime ọtụtụ afọ ndị a, Oriakụ Mallet Gautier ebutela ogbugbu ahụ na atụmatụ azụmaahịa Bahamas na France, nke butere nguzobe netwọkụ nke ndị mmekọ njem na -eguzosi ike n'ihe bụ ndị nyere aka ebe anyị na -aga n'ịkpụpụta ahịa ahịa kwụsiri ike. nke ndị njem France. Anyị ga -achọkwa ikele Nwada Clémence Engler, onye sonyeere BTO Paris afọ abụọ gara aga dịka onye nnọchite ahịa na ịre ahịa. Ọrụ nwada Engler abụrụla nnukwu uru na ọrụ anyị na France. ”
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation gbara mbọ na mmekọrịta ogologo oge ya na ndị mmekọ ụlọ ọrụ ya na France. A ga -ejikwa akụ nke ga -enyere ndị mmekọ ibe anyị aka na -aga n'ihu na azụmaahịa njem Bahamas ha site na Bahamas Tourist Office dị na London, n'okpuru nlekọta nke Director nke Ozi Europe, Mr. Anthony Stuart.
Ndị bi n'agwaetiti Bahamas na -atụ anya ịkwanye akwa ịnabata ọtụtụ puku ndị ọbịa France na -aga agwaetiti anyị kwa afọ.